Dadka ka shaqeeya arrimaha xamuulka Tansaaniya oo wanaajinaya shaqadooda
Hay’adda Dekedaha Tansaaniya ayaa maamulaysa 40% kontaynarada xamuulka ee Daarusalaam, halka Adeega Caalamigaah ee Kontaynarada Tansaaniya (TICTS) uu sameeyn doono howlo dayactir si kor loogu qaado tayada shaqada hay'addaas, sidaana waxa Khamiistii (23-ka February) wariyay wargayska Dail News ee ka soo baxa Tansaaniya.
Waaxda howlaha baddaha iyo markaakiibta Tansaaniya oo ku baaqday in la sameeyo guddo qaabilsan jaan gooynta oo madax-bannaan
Wiishash cusub oo kor u qaaday tayada shaqo ee dekedda Tansaaniya
Dekedda Mombasa oo dakhli dheeraad ah ka heshay shirkad wayn oo ah kuwa rara badeecada
“TICTS waxa ay dayactiraysaa wiishkeeda maraakiibta wax u kala rara. Iyadoo sidoo kalena ay jiraan dhismayaal hadda gacanta lagu hayo, Hay’adda Dekadaha Tansaaniya waxa ay sii buuxinaysaa howlaha bannaanaadayay,” ayuu yiri Emmanuel Mallya, oo ah madaxa Ururka Tansaaniya ee Arrimaha Wax Raridda.
Todobaadkii horena, Maamulka Howlaha Maraakiibta iyo Gaadiika (SUMATRA) ayaa siiyay TICS rukhsad saddex bilood ah oo ay ku soo saari karto kuna gudbin karto shixnadaha sifo ay wax uga qabato tayaynta howlaheeda ugana maagato wax dib-u-dhac ah.
“Saamile kasta oo howsha wax ku leh oo sabab dib-u-dhac dhinacyada ka saaridda shixnadaha dekedda isaga ayaa mas’uuliyaddaa qaadi doona,” Sidaa waxaa qoraal ku sheegay maareeyahah SUMATRA u qaabilsan Arrimaha Bulshada DavidMziray , isaga oo ka digay in ay dusha u ridan doonaan bixinta kharaashaad dheeri ah. Ma jeclaysatay maqaalkan?